एनआरएनए यूकेको सदस्यता शुल्क २५ पाउण्ड नै कायम, समयावधि बढाइयो | We Nepali
एनआरएनए यूकेको सदस्यता शुल्क २५ पाउण्ड नै कायम, समयावधि बढाइयो
वीनेपाली | २०७४ असार २५ गते ११:२२
लन्डन । महंगो भन्दै आलोचना बढिरहंदा एनआरएनए यूकेको सदस्यता शुल्क २५ पाउण्ड नै कायम हुने भएको छ । अध्यक्ष मुछेत्र गुरुङको अध्यक्षतामा शनिबार अल्डरसटमा बसेको अधिवेशन (सेप्टेम्बर ९) अघिको अन्तिम बैठकले निर्णय भइसकेको कुरामा पुनर्विचार नगर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । यसले रहरै रहरमा सदस्यता बनाएर उम्मेदवार दावी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, संघले सर्वसाधारणलाई आकर्षित भने गर्न नसक्ने कतिपयको चिन्ता छ ।
बैठकले सदस्यता लिने समायावधि बढाएर अगष्ट १४ सम्म गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष मुछेत्र गुरुङले वीनेपालीलाई जानकारी दिए । यसअघि अगष्ट ७ सम्म सदस्यता लिने अन्तिम समयसीमा थियो । साथै बैठकले अहिले रहेको अनलाइन मेम्बरसीपमा मात्र सिमित नगरि अब कागजी निवेदन (पेपर एप्लिकेसन) लाई समेत मान्यता दिने भएको छ ।
एनआरएनए यूके कार्यसमितिले फाराम भरि निवेदन दिइएका सदस्यता फाराम ग्रहण गरेर मेम्बरसीप कमिटीलाई बुझाउनेछ ।
बैठकमा एनआरएनए यूके पदाधिकारीहरु कार्यकाल छंदै विधान विपरित एमालेको प्रवास संगठन प्रवासी नेपाली मञ्च यूकेको नेतृत्वमा गएकाबारे लामो छलफल भएको थियो । बैठकले ति पदाधिकारीविरुद्ध अनुशासन समितिमा कसैले उजुरी गरे प्रक्रिया बढाइने निर्णय गरेको छ । अचम्म त प्रवासी नेपाली मञ्चमा निर्वाचित विजयविक्रम लिङदेन, दासु पाण्डे, हरि आचार्य, सुशिला राई र कृष्ण तिवारीले नैतिकता समेत ख्याल नगरि एकातिर पद छाड्न राजी भएनन् ।
यसैबीच संघले सांझ हङकङबाट आएका एनआरएनए आइसीसी सल्लाहकार त्रिलोक गुरुङ, एमाले केन्द्रिय नेताहरु डा. विजय पौडेल, डा. रमेश पौडेलसंग अन्तरक्रिया गरेको छ । उक्त अवसरमा एनआरएनए युरोप संयोजक कुल आचार्य, डा. हेमराज शर्मा लगायतको उपस्थिति थियो ।